I-Gay News - iGay Shop
Kuze kube yimanje Izindaba, Amazwana nemibono evela ezweni le-gay kulethwe kalula. Yabelana futhi uxhumane nomphakathi.
Ngamanye abantu abasha kakhulu abathanda u-Egay!
Ukunqoba okuvamile kwama-gay eKenya
Kuthunyelwe ngu-GTranslate Collaborator
I-Afrika ayiyona indawo yokungenisa izihambi kakhulu emhlabeni jikelele ukuba ibe ngumama wesilisa obala. Ukushushiswa kuvamile futhi kungabandakanya "izivivinyo zezokwelapha." Ekuphumeleleni komphakathi we-LGBTQ, inkantolo yaseKenya inqume ukuthi ukuhlolwa okuphoqelelwe kanzima akuvumelekile. Abahluleli bathi "ukubeka abafakizicelo emibhalweni yokudinga ukuhlukunyezwa kwamalungelo abafakizicelo ngaphansi kwezingxenye ze-25, 27, 28 kanye ne-29 yomthethosisekelo" nokuthi "ukusetshenziswa kobufakazi obutholakala ngokuhlolwa okubhaliwe kwabafakizicelo emacala okulwa nabo abaphula amalungelo abo ngaphansi I-athikili ye-50 yomthethosisekelo. "" Isibambiso siyisinyathelo esikhulu kakhulu ekusikeleni isithunzi sabalingqingili abaye babhekana nokuhlukunyezwa kokuhlolwa kwe-anal but ...
Amakamu okucindezela abuyele eYurophu, ngenxa yama-gay.
Ukubhikisha eNtshonalanga Yurophu, ikakhulukazi e-UK naseRussia, kuye kwabangela ukukhathazeka. Amaprosesa ase-US awancane. Abamenenja abambalwa base-US bazama ukwenza isenzo sezombusazwe.
Ngabe uBen de la Creme uya ekhaya ngempela kuleli sonto?
UBen noma "De De" njalo ebizwa ngokuthi, uhlasele ngokusemthethweni umncintiswano wesikhathi somagazini we-Rupaul weDrag Umqhudelwano we-Allstars 3 okwamanje futhi engabonakali izimpawu zokwehla, ngakho kungani ehleka ukuzithumela ekhaya kuleli sonto esikhundleni sokuvota umncintiswano?